MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward 4G Launch MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT ၏ ပိုမိုမြန်ဆန်သော အရည်အသွေးမြင့် LTE+ ကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီး ထူးခြားမှုကိုခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ 3G ကွန်ရက်ထက်ပိုမြန်ပေမယ့် ဝန်ဆောင်ခပိုပေးစရာမလိုပါ။
Website တွေဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ယခင်ကထက်ပိုမြန်ပြီး High Definition ဗီဒီယိုတွေကြည့်တာ၊ video ဖုန်းခေါ်တာ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားတာ၊ download ဆွဲတာ နဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တာတွေကို လိုင်းအပြတ်အတောက်မရှိ၊ ရပ်တန့်သွားတာမျိုး မကြုံရဘဲ အဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
MPT LTE+ ကိုအသုံးပြုရန်
(MPT LTE+ ကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် MPT SIM card ကို slot 1 မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်နှင့် Shal Pyaw သို့မဟုတ် Swe Thahar သို့မဟုတ် Shwe Zagar အစီအစဉ်များကို ဝင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။)
သင်၏ SIM card နှင့် ဟန်းဆက်ကို LTE+ အသုံးပြု၍ ရမရစစ်ရန်
*106*5# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး သင်၏ SIM card LTE+ SIM (USIM) ဖြစ်မဖြစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ။
သင်၏ SIM card USIM မဖြစ်သေးပါက သင့်ကဒ်အဟောင်းကို နီးစပ်ရာ MPT ဆိုင်များတွင် အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်ပါပြီ။
SIM card လဲနိုင်သော MPT ဆိုင်များကို ဤလင့်တွင်(http://bit.ly/2juQZ3O) ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်း "LTE+ စနစ်သုံးဟန်းဆက်" ဟုတ်မဟုတ်စစ်ကြည့်ပါ။
သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း Settings မှ More Network> Mobile Network> Network Mode သို့ဝင်၍ LTE (သို့) 4G ကို ရွေးချယ်ပါ။
LTE (သို့) 4G ဟုရွေးချယ်ရန်ပါရှိလျှင် LTE+ စနစ်သုံးဟန်းဆက်ဖြစ်ပါသည်။
(* ဖုန်းSettingသည် လက်ကိုင်ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။)
MPT LTE+ ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သောနေရာများ
MPT ၏ LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသအသီးသီးရှိ မြို့ကြီးများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ လက်ရှိတွင်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့ကြီး (၃၂)မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ပေါင်း (၈၂)မြို့နယ်တွင MPT ၏ LTE+ ကွန်ရက် ကိုချိတ်ဆက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ထပ်မံတိုးချဲ့သွားမည့် မြို့နယ်များကိုလည်း ဆက်လက်ကြေငြာပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးပါဦး။
MPT ၏ ဈေးနှုန်းချိုသာသော ပထမဆုံး LTE+ Device
please find detailed information here – http://mpt.com.mm/mm/m50a-4g-5-quad-core-sim-mm/
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ MPT ဆင်းမ်ကတ် က LTE+ အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုရင် LTE+ ကို ဖုန်းထဲက Setting ထဲမှာ ဘယ်လိုစစ်ဆေးရယူကြမလဲ? တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ MPT ဆင်းမ်ကတ် က LTE+ သုံးလို့မရဘူးဆိုရင် LTE+ သုံးလို့ရတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်ကို ဘယ်မှာလဲယူနိုင်မလဲ? ဒီအချက်လေးတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Video လေးမှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် မြန်ဆန်မှုများထဲက ပိုမိုအလျင်မြန်ဆုံး LTE+ နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုလည်း မမေ့ကြနဲ့နော်။
၁။ LTE ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
LTE+ ဆိုသည်မှာ 3G ထက်၁၀ဆအထိ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကိုပေး စွမ်းနိုင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်မှု နည်းပညာအသစ်ဖြစ််ပါတယ်။ LTE+ ဖြင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်အခြားသော မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း များပေါ်မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုသည့်အခါ ယခင်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သော အမြန်နှုန်းကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
၂။ MPT ၏ LTE+ ကဘာတွေအားသာချက်ရှိပါသလဲ။
LTE+ က လက်ရှိ 3G ထက် အလွန်မြန်ဆန်သည့်အတွက် သုံးစွဲသူတွေ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ၊ video ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အခါ၊ အရည်အသွေးမြင့် မိုဘိုင်းတီဗွီ၊ video နှင့် youtube များကြည့်သည့်အခါ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းအကြီး စားများဆော့ကစားသည့်အခါ၊ နှင့် အခြားအခြားသော အွန်လိုင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုတွေရ ယူတဲ့အခါမှာ အထစ်အငေါ့မရှိ၊ အပြတ်အတောက်မရှိ ချောမွေ့သောအွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၃။ LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ငွေအပို ပေးဆောင်စရာလိုပါသလား။
LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ငွေအပိုပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ယခုအသုံးပြုနေသော2G/3G နှုန်းထားအတိုင်း ပိုမိုမြန်ဆန်သော LTE+ ကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းအတူတူ ဒေတာပမာဏအတူတူဖြင့် လက်ရှိ MPT ၏ data packages များကို ဝယ်ယူပြီး မြန်နှုန်းမြင့် LTE+ ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
၄။ LTE+ ကိုမည်သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း LTE+ ကွန်ရက်တိုးချဲ့ဖြန့်ကျက်မှုဖြင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးတွင် LTE+ ကိုချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မြို့ကြီး (၃၂)မြို့၊ မြို့နယ်ပေါင်း (၈၂)မြို့နယ်တွင် LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ပေးထားပါတယ်။